Roobab mahiigaan ah oo ka da’ay gobolka Mudug oo ay ka jirtay abaar iyo biyo la’aan – Radio Muqdisho
Roobab mahiigaan ah oo ka da’ay gobolka Mudug oo ay ka jirtay abaar iyo biyo la’aan
Roobab mahiigaan ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa saacadihii la soo dhaafay ka da’ay deegaanno ka mid ah gobolka Mudug, oo ay ka jirtay abaar iyo biyo la’aan daran.
Roobabkan oo ka da’ay inta badan deegaannadii ay ka jirtay abaarta ugu daran ee gobolka Mudug, ayaa waxa ay xareedda wareen deegaan aad u ballaaran oo u dhaxeeya magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo.
C/risaaq Maxamed Axmed oo ah wariyaha Radio Muqdisho iyo SNTV uga soo warama gobolkaasi ayaa sheegay in roobabkani ay hakad geliyeen isu socodkii gaadiidka maadaama qeybo ka mid ah waddooyinka ay biyuhu fariisteen.
Xilli roobaadka Guga oo ka curtay dalkeena ayaa waxaa si wanaagsan ugu diirsaday dadka iyo duunyada ku dhaqan meelaha ugu daran oo ay ka jirtay abaarta iyo biyo la’aanta.
Suldaan C/kariin Maxamed: “Booqashadii madaxweynaha waxey noo aheyd dhiiri gelin”
Maamulka gobolka Banaadir dhisaya waddo bacaad ah oo ku taala degmada Kaaraan